February 2016 ~ Htet Aung Kyaw
ဥရောပရဲ့ ပွဲဦးထွက် Spring Classics မှာ Van Avermaet အနုိုင်ရ၊ နာမည်ကြီး Sagan ဒုတိယသာချိတ်။
10:26 AM Htet Aung Kyaw No comments
ဥရောပရဲ့ ပွဲဦးထွက် Spring Classics မှာ Van Avermaet အနုိုင်ရ၊
နာမည်ကြီး Sagan ဒုတိယသာချိတ်။
ဘရဂျီယံနုိုင်ငံမှာ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ အနောက်ဥရောပရဲ့ ပထမ ဆုံး Spring Classics ကီလုိုမီတာ ၂၀၀၊ Omloop Het Nieuwsblad ပွဲမှာ Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team က 4:54:12 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွား ပါတယ်။
နာမည်ကြီး ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team ကတော့ ပန်းဝင်ဖုို့ မီတာ ၂၀၀ ၀န်းကျင်အလုို နောက်ဆုံး Sprint မှာ အငိုက်မိပြီး နဲနဲ ပြတ်ကျန်သွားခဲ့လုို့ ဒုတိယနဲ့ ကျေနပ်လုိုက်ရပါတယ်။ Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal က တတိယ ရပါတယ်။
ကီလုို ၂၀၀ ရှည်ပြီး တောင်ကုန်း တောင်ကုန်းပေါင်း ၁၃ ခုနဲ့ ကျောက်လုံးခင်း လမ်း ၁၀ ခုကို ဖြတ်သန်းရတဲ့ ဒီပွဲကို အသင်းပေါင်း ၂၀ နီးပါးက စက်ဘီးသ မား ၁၉၉ ဦးဝင်ပြိုင်ပါတယ်။
တာထွက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာကတည်းက ၁၂ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခုဟာ ၅ မီနစ်ခွဲအထိ Peloton ကုိုဖြတ်ထားနုိုင်လုိုက်ပါတယ်။ Etixx-QuickStep အသင်းကဦးဆောင်ပြီး အရှိန်တင်လုိုက်နေချိန်မှာ လဲပြိုမှုဖြစ်တဲ့အတွက် အသင်းခေါင်းဆောင် တုိုနီမာတင် ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။
နောက်ပုိုင်းမှာတော့ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ဟာ တဖြေးဖြေးအရှိန်ကျလာပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ Peloton ထဲက ၄-၅ ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာပြီး ရှေ့ပြေးအုပ်စု ကိုအမှီလုိုက်ပါတယ်။ ပီတာဆာဂန်ကတော့ နောက်ပို်င်းကျမှ တကုိုယ်တော် ထွက်ပြေးလာပြီး လွတ်သွားတဲ့ ၄-၅ ဦးနဲ့ပြန်ပေါင်းမိပါတယ်။ ဒီလုိုနဲ့ သူတို့အုပ် စုဟာ Breakaway အဖွဲ့က လက်ကျန် ၃-၄ ဦးနဲ့ပေါင်းမိပြီး ပထမ အုပ်စုဖြစ် သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Peloton က အရှိန်တင်လုိုက်နေတာကြောင့် ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၀ ကီလုိုကျန် ချိန်မှာ ၁ မီနစ်တောင် မကျန်တော့ပါဘူး။ ၅ ကီလိုအလုိုမှာဆုိုရင် စက္ကန့် ၂၀ ကျော်သာကျန်ပါတယ်။ မိတော့မလုိုလုိုထင်ရပေမဲ့ ဆာဂန်ဦးဆောင်ပြီး အရှိန် တင်သွားတာကြောင့် ပန်းဝင်တဲ့အထိ သူတုို့ ၅ ဦးကုို Peloton က မမိလုိုက်ပါဘူး။
10 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာလည်း နောက်ထပ် အလားတူခရီးကြမ်း Spring Classics ဖြစ်တဲ့ ကီလုို ၂၀၀.၇ ရှည်တဲ့ Kuurne-Brussel-Kuurne ပွဲကို ဒီစက်ဘီးသမားတွေ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ဖုို့ရှိနေပါတယ်။ ဒီနေ့အားနည်းချက်တွေကို ပြန်လည်တွက် ချက်ပြီး မနက်ဖြန်မှာ ပီတာဆာဂန် ပထမ များရလာနုိုင်မလားဆုိုတာကတော့ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
အီသီယုိုပီးယားသူက ဥရောပမှာ Pro Cyclist ဖြစ်ချင်လုို့တဲ့...။
11:54 AM Htet Aung Kyaw No comments
အီသီယုိုပီးယားလုို့ပြောလုိုက်ရင် စစ်ပွဲတွေကြားက ဆင်းရဲငတ်ပြတ်နေတဲ့ နုိုင်ငံတခုအဖြစ်သာ မြန်မာတွေ ပြေးမြင်လေ့ရှိပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ တချိန် က အဲဒီလုိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာထက် အခြေအနေအများကြီးဆုိုးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခြေအနေဆုိုတာ အမြဲတန်းဆုိုးမနေပါ (မြန်မာလုို နှစ် ၆၀ မနားတန်း ပြည်တွင်း စစ်ဖြစ်နေတဲ့နုိုင်ငံ အတော်ရှား)။ အခုချိန်မှာ အဲဒီ အီသီယုိုပီးယား မြန်မာရဲ့ ရှေ့ ကိုရောက်နေပြီဆုိုတာ အသိအမှတ်ပြုရပါလိမ့်မယ်။
နုိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွါးရေးတင်ရှေ့ရောက်တာမဟုတ်။ ဟောဒီမှာ အားကစားဖက်ကုို လည်းကြည့်ပါဦး။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် အီသီယုိုပီးယားသူက ဥရောပမှာ Pro Cyclist အဖြစ် ၀င်စီးဖုို့ပြင်နေပါသတဲ့။ ကဲ... မြန်မာနုိုင်ငံက စက်ဘီးသ မားတွေ ဘယ်လုိုလဲ။
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် အီသီယုိုပီးယားသူ Hadnet Asmelash ဟာ တနုိုင်ငံ တည်းက ပရုိုစက်ဘီးသမား Tsgabu Grmay (Lampre-Merida) ရဲ့ ရည်စား ဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်ကကျင်းပတဲ့ Giro d'Italia ပွဲစဉ်တလျောက်လုံး သူရည်စား ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဟန်ကို သူမ လုိုက်ကြည့်အားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူမ ကိုယ်တုိုင်လည်း အီသီယုိုပီးယားရဲ့ စက်ဘီးချန်ပီယံ ဆုိုတာကို လူ တွေသိပ်မသိလုိုက်ပါဘူး။ Tsgabu Grmay က အီတလီမှာနေပြီး သူမက အီသီယုိုပီယားမှာ နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့နှစ်ဦး သိပ်မတွေ့ဖြစ်ဘူးလုို့ ဆုို ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကတော့ မော်ရကုိုနုိုင်ငံ Casablanca မြို့မှာ ကျင်း ပတဲ့ African Continental Championships မှာ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး ၀င်ပြိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ Hadnet ဟာ နံပတ် ၉ နေရာသာချိတ်ပေမဲ့ ပထမ ရသူ နမီးဘီးယားမှ Vera Adrian ထက် ၁၀ စက္ကန့်ပဲနောက်ကျပါတယ်။
"ကျမရဲ့အိမ်မက်ကတော့ ဥရောပမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်နုိုင်ရေးပါပဲ" လုို့ Hadnet က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါတလေတော့ ဒီအိမ်မက်ပေါ်သံသယ၀င်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုို တိကျတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်မရသေးလုို့ပါလုို့ သူမကဆုိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ ရည်းစား Grmay ကတော့ စိတ်မပျက်ဖုို့အားပေးပါတယ်။ ဘာ ကြောင့်လဲဆုို အာဖရိကန် လူမည်းတဦး ဥရောပမှာသွားစီးဖုို့ဆုိုတာ သိပ် မ လွယ်တဲ့အကြောင်း၊ သူ စပြီးသွားစီးစဉ်ကလည်း အတော်ခက်ခဲခဲကြောင်း၊ အမျိုးသမီးတဦးအနေနဲ့ဆုို ပိုခက်နုိုင်တယ်လုို့ပြောပါတယ်။
Hadnet Asmelash ဟာ အီသီယုိုပီးယားနုိုင်ငံ မြောက်ပုိုင်းရှိ အမြင့်မီတာ ၂၄၀၀ ကျော်မှာ မနက်တုိုင်း လေ့ကျင့်ရေး ဆင်းနေပါတယ်။ ညနေပုိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပါတယ်။ သူမဟာ တခြား အမျိုးသမီး ၆ ဦး၊ အမျိုးသား ၁၈ ဦးနဲ့အတူ အိမ်ကြီးတခုကိုငှားထားပြီး ၀ုိုင်းစုနေကြပါတယ်။
ဒီအဆောက်ဦတွက်သူ့ရဲ့အသင်း TransEthiopia က ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး သူမဟာ အမျိုးသားစက်ဘီသမားတွေလုို တလအတွက် အီသီငွေ ၃၃၀၀ သုို့မဟုတ် ဒေါ်လာ ၁၅၅ ရပါတယ်။ သူမကုို ဒေသတခုလုံးက သိပြီး အောင် မြင်မှုဆက်ရဖုို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ။
ဘလဂျီယံ Spring Classics အတွက် Tinkoff အသင်းကို Sagan ဦးဆောင်မယ်...။
လာမဲ့ စနေ-တနင်္ဂနွေ (ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၇-၂၈) မှာ စတင်မဲ့ ဘလဂျီယံနုိုင်ငံက Omloop Het Nieuwsblad နဲ့ Kuurne-Brussel-Kuurne ၂ ရက်တာ Spring Classics 2016 ပွဲစဉ်တွေကုို ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပီတာဆာဂန်က Tinkoff အသင်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဝင်ပြိုင်မယ်လုို့သိရပါတယ်။
ဇန်နာဝါရလကုန်ပုိုင်း အာဂျင်တီးနားမှာကျင်းပတဲ့ Tour de San Luis ပွဲပြီး ကတည်းက ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတဲ့ ဆာဂန်ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ သူရဲ့ ထူခြား တဲ့စီးဟန်ကို ဥရောပမြေမှာ ပရိသတ်တွေ ပြန်တွေ့ရတော့မှာပါ။
သြစတေလျ၊ တောင်အမေရိက၊ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသနဲ့ မြေထဲပင်လယ် အစပ် ဥရောဖက်ချမ်းဖက်မှာ စက်ဘီးပွဲတွေကျင်းပနေတာ ၂ လလောက်ရှိနေပြီဖြစ် ပေမဲ့ ဥရောပအလယ်ပုိုင်း (စက်ဘီးလောကရဲ့ အဓိကဒေသ) မှာတော့ မနက် ဖြန်စတင်တဲ့ ဘလဂျီယံက ပွဲဟာ ၂၀၁၆ ရဲ့ ပထမ ဆုံး ကွင်းဖွင့်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
စနေမှာစတင်မဲ့ Omloop Het Nieuwsblad ပွဲဟာ ကီလုိုမီတာ ၂၀၀ ရှည်ပြီး တောင်ကုန်းပေါင်း ၁၃ ခုနဲ့ ကျောက်လုံးခင်းလမ်း ၁၀ ခုကို ဖြတ်သန်းရမှာဖြစ် ပါတယ်။ လမ်းဟာကြမ်းတမ်းပြီး ဝေးလံတဲ့အပြင် ရာသီဥတုကလဲ မုိုးရွာ၊ နှင်း ကျဖြစ်နုိုင်တာတာကြောင့် စက်ဘီးသမားတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ စိမ်ခေါ်မှု တွေရှိနေပါတယ်။
တနင်္ဂနွေမှာ ဆက်တုိုက်ကျင်းပမဲ့ Kuurne-Brussel-Kuurne ကလည်း စနေ ပွဲနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ၂၀၀.၇ ကီလုိုမီတာရှည်ပြီး ကုန်းတက် ၁၁ ခုပါဝင်မှာဖြစ် ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ ပီတာဆာဂန်နဲ့အတူ ပါဝင်မဲ့ Tinkoff အသင်းဖေါ်တွေကတော့ Maciej Bodnar, Daniele Bennati, Oscar Gatto, Jay McCarthy, Manuele Boaro, Nikolay Trusov နဲ့ Adam Blythe တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
တခြားအသင်းတွေကနေပါလာမဲ့ နာမည်ကြီးတွေကတော့ နော်ဝေမှ နာမည် ကြီးတာတုိုဘုရင် Alexander Kristoff (Katusha), အိမ်ရှင် ဘလဂျီယံသား Tom Boonen (Etixx-QuickStep), BMC အသင်းမှ Greg Van Avermaet နဲ့ Philippe Gilbert။ ဂျာမီဏီမှ နာမည်ကြီး စံချိန်ပြုဆရာ Tony Martin (Etixx-QuickStep) တုို့အ၀င် UCI အသိအမှတ်ပြု အသင်းပေါင်း ၂၀ နီးပါးမှ စက်ဘီးသမား ၁၀၀ ကျော် ၀င်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါ တယ်။
(Euro Sport ကလည်း Live ပြမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်)။ မြန်မာစံတော်ချိန် စနေည ၆-၇ နာရီဝန်းကျင်ဖြစ်မယ်လုို့ ထင်ပါတယ်။
ပြိုင်ဘီးထဲမှာ မော်တာတွေ လျှုို့ဝှက် ထည့်ထားနုိုင်သလား...။
သတင်းတပတ်တာ နာမည်ကြီးပွဲ ၃ ခုကိုဆက်တုိုက်တင်ပြပြီးတဲ့နောက် နည်းပညာဆုိုင်ရာ ထူးဆန်းထွေလာသတင်းတပုဒ်ကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ ဘယ်လုိုမှမဖြစ်နုိုင်တဲ့သတင်းမျိုးလုို့ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုို ပရုိုစက်ဘီးသမားတွေဟာ သူတုို့စက်ဘီးတွေရဲ့ ကို်ယ်ထည် ထဲ (အလယ်ဂီယာအုံထဲ) မှာ အလွန်သေးငယ်တဲ့ မော်တာကို လျှို့ဝှက်တပ် ထားနုိုင်တယ်ဆုိုပြီး စွပ်စွဲချက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းပါ။
စက်ဘီးဝါသနာရှင်တွေ မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ မနှစ်က အီတလီပွဲ Giro d’Italia မှာ ပန်းရောင်အကျီရသွားသူ (ဒီနေ့ Volta ao Algarve မှာ ပထမ ရသူ) Alberto Contador (Spa) Tinkoff ဟာ ဒုတိယ သတင်းပတ် တောင် တက်ပွဲတခုအတွင်း မြေပြန့်ကနေ တောင်အတက်သို့အကူးမှာ စက်ဘီးကုို အသစ်လဲလုိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလုို အသစ်လဲလုိုက်တဲ့စက်ဘီးရဲ့အတွင်းထဲမှာ လျှို့ဝှက်မော်တာ ပါနုိုင် တယ်ဆုိုပြီး သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်တဦးက စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် Alberto Contador ရဲ့ စက်ဘီးအပါဝင် နာမည်ကြီးတွေရဲ့ စက်ဘီးအတော်များများကို UCI နည်းပညာအဖွဲ့က စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။
တခါ ဇူလလုိုင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ Tour de France မှာလည်း အလားတူစွပ်စွဲချက် ထပ်ပေါ်လာပြန်တဲ့အတွက် အ၀ါရောင်အကျီရသွားသူ Christopher Froome (UK-Sky) ရဲ့ ဘီးအပါဝင် နာမည်ကြီး စက်ဘီးသမား တဒါဇင်ကျော်ရဲ့ ဘီးတွေ ကို စစ်ဆေးပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် ၂၀၁၆ အစောပုိုင်းရာသီကကျင်းပတဲ့ World Cyclo-cross World Championships ပွဲမှာတော့ ဒီလုို လျှို့ဝှက်မော်တာတပ်ထားတဲ့ ဘီးကို UCI က စစ်ဆေးတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ (စာရေးသူကုိုယ်တုိုင် အသေး စိပ်နားမလည်သေးပါ)။
ဒါကြောင့် လာမဲ့သီတင်းပတ် စနေ-တနင်္ဂနွေမှာစတင်မဲ့ Omloop Het Nieuwsblad ပွဲအမှီ ယူရွန် ၅ သောင်းပေးရမဲ့ ဈေးကြီးလှတဲ့ စစ်ဆေးရေး ပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူဖုို့ ဘရယ်ဂျီယံ စက်ဘီးအဖွဲ့ချုပ်က ဆုံးဖြတ်လုိုက်တယ်လုို့ သိရပါတယ်။
UCI ကနေ နည်းပညာဆုိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုတွေအတွက် ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ အခုချိန်အထိ တိကျတဲ့စစ်ဆေးရေးပစ္စည်းထုတ်မပေးနုိုင်သေးတာကြောင့် အဲဒါကုိုစောင့်မနေတော့ပဲ ကုိုယ်ဘာသာ ၀ယ်လုိုက်ရတာဖြစ်တယ်လုို့ ဘလ ဂျီယံ စက်ဘီးအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။
စနေ-တနင်္ဂနွေမှာစတင်မဲ့ပွဲဆီ လက်ရှိကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပီတာဆာဂန်အပါဝင် နာ မည်ကြီးအတော်များများဝင်ပြိုင်ကြမယ်လုို့သိရပါတယ်။ (ဒီနည်းပညာဆုိုင်ရာ ကိစ္စကုို ထပ်မံလေ့လာပြီး တင်ပြပေးပါဦးမယ်)။ ။
Ruta del Sol ပွဲ Alejandro Valverde ဗုိုလ်စွဲ...။
စပိန်နုိုင်ငံ မြေထဲပင်လယ်ဖက်မှာ ၅ ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ (တပြိုင်တည်း ၃ ပွဲဖြစ်နေလုို့ ဒီပွဲကို မထမပုိုင်း ၄ ရက်စလုံး မတင်ပြဖြစ်ခဲ့ပါ) Ruta del Sol ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ တောင်တက်ပွဲ (San Roque မှ Alto Penas Blancas အထိ) 164.2 km မှာ Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team က 4:46:51 နာရီနဲ့ တကုိုယ်တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo က 0:00:36 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Rafal Majka (Pol) Tinkoff Team က 0:00:42 စက္ကန့်နောက်ကျနဲ့ တတိယ ရပါတယ်။
Alejandro Valverde Belmonte ဒီနေ့အတွက် ပထမ ရတဲ့အပြင် အရင်နေ့ တွေကလည်း အနီရောင်အကျီနောက်မှာ ကပ်လုိုက်နေတာကြောင့် အားလုံး ကိုကျော်ဖြတ်ပြီး အနီရောင်အကျီကိုပါ သိမ်းပုိုက်နုိုင်လုိုက်ပါတယ်။
မနေ့ကအထိ အနီရောင်ရထားတဲ့ အမေရိကန်မှ နာမည်ကြီး GC ဆရာကြီး တဦးဖြစ်သူ Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team က ဒုတိယ နဲ့ ကျေနပ်လုိုက်ရပါတယ်။
သူတို့ ၂ ဦးရဲ့ခြေစွမ်းကို မနှစ်က တုိုးဒီဖရင့်ကြည့်ဖူးသူတုိုင်း သိပြီးဖြစ်နုိုင်ပါ တယ်။ ဒါဟာ Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team အတွက် ၂၀၁၆ ပွဲဦးထွက် နုိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၅ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရသွားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
3 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:00:52
10 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky 0:02:45 တုို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
Volta ao Algarve ပွဲ ပထမ နေ့ Marcel Kittel အနုိုင်ရ...။
ပေါ်တူဂီနုိုင်ငံမှာ ဒီနေ့စတင်ကျင်းပတဲ့ ၆ ရက်ကြာစက်ဘီးပွဲ ပထမ နေ့ (Lagos - Albufeira) 163.6 km ပွဲမှာ ဂျာမဏီမှ တာတုိုဘုရင် Marcel Kittel (Ger) Etixx - Quick-Step က 3:52:35 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ နောက်ထပ် ဂျာမဏီကပဲ တာတုိုဘုရင် (မနှစ်က တုိုးဒီဖရင့် မှာ ခြေစွမ်းပြထားသူ) André Greipel (Ger) Lotto Soudal က ဒုတိယနဲ့ Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo က တတိယ အဖြစ် ကပ်လျက် ပန်းဝင်ပါတယ်။
ပွဲစပြီးမကြာခင်မှာကတည်းက ၃ ဦးပါ Breakaway တခုထွက်ပြေးလွတ် မြောက်သွားပြီး ခရီးတ၀က်အကျိုးမှာ (ကီလုို ၁၀၀ ကျော်မှာ) ၈ မီနစ်အထိ Peloton ကို ဖြတ်ထားနုိုင်လုိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကျမှ နာမည်ကြီးအသင်း တွေက Peloton ကို ဦးဆောင်ပြီး အသားကုန်လုိုက်တဲ့အတွက် ပန်းဝင်ကာ နီးမှ မီသွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပန်းမ၀င်ခင် ၁၀ ကီလုိုအတွင်း တိမ်းမှောက်မှု ၂ ကြိမ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အတွက် စက်ဘီးသမားတချို့ ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ အများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအခံရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ မနှစ်က အီတလီ ၂၁ ရက်တာပွဲမှာ ပန်းရောင်အကျီရထားသူ Alberto Contador (Tinkoff) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ အခြား GC နာမည်ကြီးတဦးဖြစ်သူ Geraint Thomas တုို့ ဟာ ၂ စက္ကန့်နောက်ကျပြီးပန်းဝင်ခဲ့ပေမဲ့ စပိန်ပွဲမှာ အနီရောင်အကျီရထားသူ အီတလီလူငယ် Fabio Aru (Astana) ကတော့ ၁၁ စက္ကန့်နောက်ကျခဲ့ပါ တယ်။
ဒီနေ့ပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားသူ တွေကတော့..
1 Marcel Kittel (Ger) Etixx - Quick-Step 3:52:25
2 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:00:04
4 Wouter Wippert (Ned) Cannondale Pro Cycling 0:00:10
5 Victor Campanaerts (Ned) Team LottoNl-Jumbo
10 Pawel Cieslik (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team တုို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Lagoa ကနေ Alto da Fóia (Monchique) အထိ 198.6 km ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
Volta ao Algarve ပွဲ ဒုတိယနေ့ Luis Leon Sanchez အနုိုင်ရ...။
ပေါ်တူဂီမှာ ၆ ရက်ကြာကျင်းပနေတဲ့ Volta ao Algarve ပွဲ ဒုတိယနေ့ (Lagoa ကနေ Alto da Fóia (Monchique) အထိ) 198.6 km ပြိုင်ပွဲမှာ စပိန်မှ Luis Leon Sanchez(Spa) Astana က 5h 08m 25s နာရီနဲ့ ပထမ ရသွား ပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ နာမည်ကြီး GC သမားတဦးဖြစ်သူ Geraint Thomas (GBr) Team Sky က ၁ စက္ကန့်နောက် ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Primoz Roglic (Slv) LottoNL-Jumbo က ၃ စက္ကန့် နောက်ကျပြီး တတိယရပါတယ်။
စပိန်က နာမည်ကြီး Alberto Contador (Tinkoff)နဲ့ အီတလီက နာမည်ကြီး Fabio Aru (Astana) တုို့ကတော့ စက္ကန့် ၂၁ နဲ့ ၁၅ စက္ကန့်စီနောက်ကျပြီးမှ ပန်းဝင်နုိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
5. Tiago Machado (Katusha),a15s တို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Sagres ကနေ Sagres အထိ 18 km ကို (ITT) တဦး ချင်းစံချိန်ြ့ပုစီးကြဖုို့ရှိနေပါတယ်။ ။
Volta ao Algarve တတိယ နေ့ Cancellara အနုိုင်ရ...။
ပေါ်တူဂီမှာ ၅ ရက်ကြာကျင်းပနေတဲ့ Volta ao Algarve တတိယနေ့ (Sagres ကနေ Sagres အထိ)18 km တဦးချင်းစံချိန်ပြု (ITT) ပွဲမှာ ဆွင်ဇလန်မှ နာမည်ကြီး GC သမားတဦးဖြစ်သူ Fabian Cancellara (Swi) Trek-Segafredo က 0:20:57 မီနစ်နဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
ဂျာမဏီမှ စံချိန်ပြုဆရာကြီး Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step က 0:00:05 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Geraint Thomas (GBr) Team Sky က 0:00:28 နောက်ကျနဲ့ တတိယ ရပါတယ်။
ဒီပုဂ္ဂိုလ် ၃ ဦးစလုံးကုို စက်ဘီးဝါသနာရှင်တွေကောင်းကောင်းမှတ်မိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ မနှစ်က တုိုးဒီဖရင့် ပထမ သတင်းပတ် အ၀ါရောင်အကျီရတဲ့ နေ့ တွေမှာ ကာစီလာလားရော၊ တုိုနီမာတင်ရော ၂ ဦးစလုံး ဒလိမ့်ကောက်ခွေးလဲ ပြီး ဒဏ်ပြင်းတဲ့အတွက် ပြိုင်ပွဲကထွက်၊ ဆေးရုံတက် လနဲ့ချီ အနားယူလုိုက်ခဲ့ ရသူတွေပါ။
သောမတ်စ်ကတော့ နောက်ဆုံးသတင်းပတ်မှာ ဂျိုင့်ထဲပြုတ်ကျပေမဲ့ ဘာမှ တော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တုိုနီမာတင်ဟာ ဒီနေ့ ဒုတိယ သာရပေမဲ့ ၃ ရက်ပေါင်း ပထမ အဖြစ် အ၀ါရောင်အကျီကိုပါ ရသွားခဲ့ပါတယ်။ မနေ့ကအထိ အ၀ါရောင် အကျီရထားသူ Luis Leon Sanchez (Astana) ကတော့ ဒီနေ့ပွဲမှာ လဲချော်ပြီး မျက်နှာမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက် ပွဲကနေ ထွက်လုိုက်ရပါတယ်။
ပွဲမစခင်က နာမည်ကြီးနေတဲ့ GC ဆရာကြီး ၂ ဦးဖြစ်သူ Alberto Contador (Spa) Tinkoff Team က 0:01:03 နောက်ကျပြီး နံပတ် ၁၃ နဲ့ Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က 0:01:47 မီနစ်နောက်ကျပြီး 49 နေရာကနေ ပန်းဝင်ပါတယ်။
1 Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step 9:22:17
4 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:00:46
6 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 0:00:52
10 Alberto Contador (Spa) Tinkoff Team 0:01:07
11 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:01:09
12 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:01:22
13 Zdenek Stybar (Cze) Etixx - Quick-Step 0:01:23
14 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:36
15 Amaro Antunes (Por) La Aluminios/Antarte 0:01:38
17 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team တို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့. S. Brás de Alportel ကနေ Tavira အထိ 194 km ကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
Volta ao Algarve ၄ ရက်မြောက်နေ့ Marcel Kittel ပြန် အနုိုင်ရ...။
ပေါ်တူဂီမှာ ၅ ရက်ကြာကျင်းပနေတဲ့ Volta ao Algarve ၄ ရက်မြောက်နေ့ (S. Brás de Alportel ကနေ Tavira အထိ) 194 km ပြိုင်ပွဲမှာ ဂျာမနီမှ နာမည်ကြီးတာတုိုဘုရင် Marcel Kittel (Ger) Etixx - Quick Step က 4:46:35 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Wouter Wippert (Ned) Cannondale Pro Cycling Team နဲ့ Jens Debusschere (Bel) တုို့က ဒု- တ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အ၀ါရောင် အကျီပုိုင်ရှင်ကတော့ အပြောင်းအလဲမရှိပဲ မနေ့ကအတုိုင်း Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step က ဆက်ထိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
10 Alberto Contador (Spa) Tinkoff 0:01:07 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် Almodôvar ကနေ Malhão (Loulé) အထိ 169 km ကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
Volta ao Algarve ပွဲပြီးစီး Thomas အ၀ါရောင်အကျီရ...။
ပေါ်တူဂီမှာ ၅ ရက်ကြာကျင်းပနေတဲ့ Volta ao Algarve ပွဲ နောက်ဆုံးနေ့
(Almodôvar ကနေ Malhão (Loulé) အထိ) 169 km ပြိုင်ပွဲမှာ စပိန်မှ နာမည်ကြီး GC ဆရာကြီး Alberto Contador (Spa) Tinkoff က 4:24:47 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ အီတလီမှ နာမည်ကြီး GC လူငယ် Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က 0:00:20 နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ ပြင်သစ်မှ နာမည် ကြီး GC သမား Thibaut Pino (Fra) Tfdj က တတိယ ရပါတယ်။
မနေ့ကအထိ အ၀ါရောင်အကျီရထားသူ Tony Martin (Ger) Etixx - Quick Step ဟာ တောင်အတက် အစောပုိုင်းမှာကတည်းက ပြတ်ကျန်ခဲ့တဲ့အတွက် အ၀ါရောင်ကုို စွန့်လုိုက်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနေ့က ဒုတိယ ရနေပြီး ဒီနေ့မှာ လည်း ၂၈ စက္ကန့်အပြတ်နဲ့ ၅ နေရာကနေပန်းဝင်သူ ဗြိတိန်မှ GC ဆရာကြီး Geraint Thomas (Gbr) Team Sky က အ၀ါရောင်အကျီကုို သိမ်းပုိုက်သွား ပါတယ်။
ဒီနေ့ ပ-ဒု-တ ရသူရော၊ GC အတွက် ပ-ဒု-တ ရသူတွေရော အားလုံးဟာ မနှစ်က တုိုးဒီဖရင့်နဲ့ အီတလီ၊ စပိန်ပွဲတွေမှာ အကြိတ်အနယ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးသူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ပွဲဟာ အတော်စိတ်လှုပ်ရှားဘွယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ သောမတ်စ်အတွက် ၂၀၁၆ ပထမ ဆုံး အ၀ါရောင်အကျီရရှိခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။
၅ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရသွားတဲ့ GC သမားတွေကတော့..
1 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 8:34:15
2 Ion Izagirre (Spa) Movistar Team 0:00:19
3 Alberto Contador (Spa) Tinkoff 0:00:26
4 Thibaut Pino (Fra) Tfdj 0:00:32
5 Primož Roglic (Slv) Team Lottonl - Jumbo 0:00:49
8 Jarlinson Pantano (Col) Iam Cycling 0:01:04
10 Manuel Amaro (Por) Antunesla Aluminios - Antarte 0:01:27 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။ ။
3:47 AM Htet Aung Kyaw No comments
Disc ဘီးတွေကို နုိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာ တရားဝင်သုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း UCI က မနှစ်ကစတင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်နုိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာ Disc သုံးတဲ့ အသင်းတချို့ပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နည်းပညာသမားတွေကြားမေးခွန်းထုတ်နေတာက တာဝေးပွဲတွေမှာ မတော်တဆ ဘီးပေါက်လုို့ (ဥပမာ မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ Boasson Hagen လုို အဖြစ်မျိုးဆုိုရင်) ပြန်ဖြုတ်အသစ်လဲမယ်ဆုိုရင် ရိုးရုိုးဘီးတွေ ဖြုတ်လဲတာ ထက် အချိန်ပိုကြာသွားမလား ဆုိုတာပါ။
Disc ဘီးသုံးသူတွေကတော့ မကြာပါဘူး။ အတူတူလောက်ပဲရှိပါတယ်။ အလွန်ဆုံးကြာမှ ၁၄ စက္ကန့်တည်းပါတဲ့။ ရိုးရုိုးဘီးတွေက အဲလောက်တော့ မကြာဘူးထင်တာပဲ။ ၁၄ စက္ကန့်ဆိုတာ ဒီတုိုင်းထုိုင်နေချိန်မှာ ဘာမှမသိသာ ပေမဲ့ တနာရိ ကီလုို ၆၀ နှုန်းလောက်နဲ့သွားနေတဲ့ စက်ဘီးအုပ်ထဲကနေ ဘီး ပေါက်လုို့ ၁၄ စက္ကန့်ကြာခဲ့ပြီဆုိုရင် အဲဒီအုပ်ကို အမီပြန်လုိုက်ဖုို့ဆုိုတာ အသင်း ဖေါ်တွေကသာ မကယ်ဘူးဆုိုရင် မတွေးဝံ့စရာပါပဲ။
ဟောဒီမှာ ဗွီဒီယုို ဖွိုင်များကိုလေ့လာတော်မူပါ။
သေချာတာတော့ မဟာအဆင့်မြင့်၊ မဟာတန်ဖုိုးကြီး စက်ဘီးတွေအကြောင်း ရေးနေ၊ ဘာသာပြန်ပေမဲ့ စာရေးသူကို်ယ်တုိုင်မှာတော့ ၁၉၈၈ တုန်းက စီးခဲ့ဖူး တဲ့ လက်ချိုးဘီးအဆင့်ကနေ မတက်နုိုင်သေးပါ။
အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ် Pro စက်ဘီးသမား မြန်မာပြည်မှာရှိသလား...။
အမေရိကားမှာတော့ Christopher Horner..ရှိနေဆဲ...။
လူငယ်ခြေတက်တွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဘွယ်သတင်းတွေရှာရင်းနဲ့ အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ်အထိ စက်ဘီးစီးလုို့ကောင်းတုန်း ချန်ပီယံ ဟောင်း တဦးကုိုသွားတွေ့မိပါတယ်။
ချန်ပီယံဟောင်းဆုိုတာ ၂၀၁၃ တုန်းက ၂၁ ရက်တာ စပိန်ပွဲ VueltaaEspaña မှာ အနီရောင်အကျီရခဲ့တာကို ဆုိုလုိုတာပါ။ ဒီအသက် အရွယ်နဲ့ ဒီလုို ၂၁ ရက်တာ ကမ္ဘာကျော်ပွဲတွေမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ဖုို့ဆုိုတာ ဘယ်လုိုမှ မလွယ်တဲ့ကိစ္စ။
အဲဒီထက်ပိုမလွယ်တာက အသက် ၄၂ မှာ ဒီလုိုကြီးမားတဲ့ချန်ပီယံရပြီဆုိုတော့ ပရုိုဖက်ရှင်နယ်စက်ဘီးလောက ကနေ သူအနားယူတော့မယ်လို့ အများက ထင်ထားခဲ့တာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆုို ဒီလုိုချန်ပီယံဆုတောင် မရဖူးတဲ့ နာမည်ကြီး အတော်များများဆုိုရင် အသက် ၃၀ ကျော် ၄၀ နားနီးတာနဲ့ ပရုိုဘ၀ကနေ အနားယူလုိုက်တာ တွေ့နေရ တယ်မဟုတ်ပါလား။
အခုတော့ သူဟာ အနားမယူတဲ့အပြင် စက်ဘီးအသင်းသစ် တခုနဲ့တောင် စာချုပ်အသစ် ထပ်ချုပ်လုိုက်ပါသေးတယ်။ အမေရိကန်က စက်ဘီး အကျော်အမော် Christopher Horner ကုို စာချုပ်အသစ်နဲ့ငှားလုိုက်တဲ့ အသင်းကတော့ Lupus Racing Team ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအသင်းဟာ အရင်က ဥရောပပွဲတွေမှာ အတော်များများဝင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ မြောက်အမေရိကား (အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါ) ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ California, Utah, Colorado and Alberta ကုိုသာ ဦးစားပေးမယ်လုို့ဆုိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ် ဆရာသမား Horner ရဲ့ ခြေစွမ်းကို Tour of California မှာ မကြာခင် (နွေဦးရာသီအတွင်း) မြင်ရတော့မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ။
Dubai Tour ပထမ နေ့ Kittel အနုိုင်ရ...။
ဒူဘုိုင်းမှာ ဒီနေ့စတင်ကျင်းပတဲ့ ၄ ရက်ကြာ Dubai Tour ပထမနေ့ (Dubai - Fujairah 179 km) ပွဲမှာ လက်ရှိချန်ပီယံ Mark Cavendish ကုို Marcel Kittel (Etixx-QuickStep) က အနုိုင်ယူပြီး 3:35:21 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါ တယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Mark Cavendish (GBr) Dimension Data နဲ့ Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo တို့က ဒုတိယနဲ့ တတိယ ရပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားသူ ၁၀ ဦးကတော့
10 Tomas Vaitkus (Ltu) Al Nasr Pro Cycling Team-Dubai တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့... Dubai ကနေ Palm Jameirah အထိ 188 km ကို ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
Dubai Tour ဒုတိယ နေ့ Viviani အနုိုင်ရ...။
ဒူဘုိုင်းမှာ မနေ့က စတင်ကျင်းပတဲ့ ၄ ရက်ကြာ Dubai Tour ဒုတိယနေ့ (Dubai ကနေ Palm Jameirah အထိ 188 km) ပွဲမှာ Elia Viviani (Ita) Team Sky က 4:07:39 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Sacha Modolo (Ita) Lampre - Merida နဲ့ Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo ကပ်လျက်ပန်းဝင်ပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယ ရပါ တယ်။
ဒါပေမဲ့ ပန်းမ၀င်ခင်လေးမှာ ကြီးမားတဲ့လဲပြိုမှုတခုဖြစ်တဲ့တာကြောင့် နာမည်ကြီး Sprinter တွေ ဖြစ်တဲ့ Marcel Kittel (Etixx-QuickStep) နဲ့ Mark Cavendish (GBr) Dimension Data အပါဝင် အတော်များများလဲတဲ့အထဲ ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ ...
4 Sacha Modolo (Ita) Lampre - Merida 0:00:04
6 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club 0:00:09
10 Chris Opie (GBr) ONE Pro Cycling တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
Dubai Tour တတိယနေ့ Lobato အနုိုင်ရ...။
ဒူဘုိုင်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၄ ရက်ကြာ Dubai Tour တတိယနေ့ (Dubai - Hatta Dam 172 km) ပြိုင်ပွဲမှာ Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Movistar Team က 4:13:23 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo က 0:00:02 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team က 0:00:04 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး တတိယ ရပါတယ်။
မနှစ်က GC ပထမ ရထားသူ နာမည်ကြီး မာ့ခ် ကားဗစ်ဒစ်ကတော့ ဒီနှစ် သူ မရတာသေချာသွားပြီလုို့ပြောပါတယ်။ ပထမ နေ့က အရင်ဆုံးပန်းဝင်သူ ကာတဲလ် ကတော့ ၆ စက္ကန့်ပြတ်ပြီး တတိယ နေရာကနေ လုိုက်နေဆဲပါ။
၃ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားသူ GC သမား ၁၀ ဦးကတော့...
2 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Movistar Team 0:00:02
3 Marcel Kittel (Ger) Etixx - Quick-Step 0:00:06
4 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:00:12
5 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 0:00:19
6 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 0:00:21
8 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff Team 0:00:24
10 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club 0:00:25 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ နောက်ဆုံးနေ့ပွဲစဉ်အဖြစ် Dubai - Dubai (မြို့ပတ်) 132 km ကုို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြဖုို့ရှိနေပါတယ်။ ။
Dubai Tour နောက်ဆုံးနေ့ Kittel အနုိုင်ရ...။
ဒူဘုိုင်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၄ ရက်ကြာ Dubai နောက်ဆုံးနေ့ (Dubai - Dubai (မြို့ပတ်) 132 km ပြိုင်ပွဲမှာ Marcel Kittel (Ger) Etixx-QuickStep က 02:50:47 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ နာမည်ကြီး Sprinter တွေဖြစ်တဲ့ Elia Viviani (Ita) Team Sky နဲ့ Mark Cavendish (GBr) Dimension Data တုို့က ဒုတိယနဲ့ တတိယ ရပါတယ်။
Marcel Kittel ဟာ ဒီနေ့ပထမရတဲ့အပြင် မနေ့ကအထိ GC ပထမရထားသူ Nizzolo နဲ့ ၆ စက္ကန့်သာပြတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ရတဲ့ ၁၀ စက္ကန့်အပိုဆုနဲ့ တွက်လုိုက်တဲ့အခါ Nizzolo ကို ၄ စက္ကန့်အသာနဲ့ GC ပထမ နေရာကိုပါ ပြန်ရသွားပါတယ်။ ဒါ ဟာ Marcel Kittel ရဲ့ ၂၀၁၆ ပွဲဦးထက် အောင်ပွဲ လည်းဖြစပါတယ်။
၂၀၁၆ မှာ ရည်မှန်းချက်တွေ အများကြီးထား ထားတဲ့ Mark Cavendish က တော့ မနှစ်က သူ ပထမ ရထားတဲ့ပွဲမှာ ဘာမှမရပဲ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လာမဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ အုိုလံပစ်ပွဲမှာတော့ သူ ရလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
၄ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရသွားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
10 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai 00:00:29 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။ ။
Challenge Mallorca race ပထမနေ့ Greipel အနုိုင်ရ...။
ဥရောပတုိုက်နဲ့ အာဖရီကတုိုက်အကြား မြေထဲပင်လယ်ထဲက စပိန်ပုိုင်ကျွန်း Mallorca မှာကျင်းပတဲ့ Challenge Mallorca race ပြိုင်ပွဲ ပထမနေ့ 174km မှာ ဂျာမဏီမှ နာမည်ကြီး Sprinter André Greipel (Ger) Lotto Soudal က 4:05:15 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 နဲ့ Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data တုို့က ကပ်လျက်ပန်းဝင်ပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယ ဖြစ်သွားပါတယ်။
မနှစ်က တုိုးဒီဖရင့်ပွဲနဲ့ အခြားပွဲအတော်များများမှာ ပီတာဆာဂန်နဲ့အပြိုင် ခြေ စွမ်းပြခဲ့သူ Greipel အတွက် ဒါဟာ ၂၀၁၆ ရဲ့ ပထမဆုံးသော အောင်ပွဲဖြစ်ပါ တယ်။ ၁၂ နှစ်တာ သူရဲ့ ပရုို စက်ဘီးသမားဘ၀အတွက်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ၁၂၄ ကြိမ်မြောက် အောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
တုိုးဒီဖရင့် ချန်ပီယံဟောင်းနဲ့ တနာရီစာ Hour Record စံချိန်သစ်ပုိုင်ရှင် လက် ရှိဗြိတိန်အသင်းခေါင်းဆောင် Bradley Wiggins အပါဝင် စက်ဘီးသမား ၁၆၇ ဦး ဒီပွဲကုိုဝင်ပြိုင်ကြပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Trofeo Pollenca-Port de Andratx တောင်တက်ပွဲတွေ ကုို ဆက်ပြိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ ။